File EPUB (Ihe Ọ Bụ na Otu esi emeghe otu)
Windows Ụdị Njikwa
Kedu ihe bụ EPUB File?
EPUB bụ faịlụ ndị kachasị ewu ewu maka akwụkwọ dijitalụ
Ụdị faịlụ EPUB (mkpụmkpụ maka akwụkwọ eletrik) bụ usoro e-akwụkwọ na ndọtị .epub. Ịnwere ike ibudata faịlụ EPUB ma gụọ ha na ama gị, mbadamba, e-agụ ma ọ bụ kọmputa. Akwụkwọ a na-edeghị akwụkwọ e-ezughị ezu na-akwado ndị na-agụ akwụkwọ e-akụ karịa ihe ọ bụla ọzọ.
EPUB 3.1 bụ nsụgharị ọhụrụ EPUB. Ọ na-akwado nkwado mmekọrịta, ọdịyo, na vidiyo.
Otu esi mepee EPUB File
EPUB faịlụ nwere ike meghere ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ e-ederede, gụnyere B & N Nook, Kobo eReader, na ngwa Apple iBooks. A ghaghị ịgbanwere faịlụ EPUB tupu ha ejiri ya mee ihe na Amazon Kindle.
Enwere ike ịmepe faịlụ EPUB na kọmpụta na ọtụtụ usoro n'efu, dịka Caliber, Adobe Digital Editions, iBooks, EPUB File Reader, Stanza Desktọpụ, Ụdị, Sumatra PDF, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọtụtụ iphone na android ngwa ọdịnala dị na-ekwe ka ikiri nke EPUB faịlụ. E nwere ọbụna Firefox Add-on (EPUBReader) na Chrome ngwa (Mfe EPUB Reader) nke na-enye gị ohere ịgụ faịlụ EPUB na ihe nchọgharị ahụ dị ka akwụkwọ ndị ọzọ.
Akwụkwọ Google Play bụ ebe ọzọ ị nwere ike mepee faịlụ EPUB site na ịdefe faịlụ EPUB na akaụntụ Google gị ma na-ele ya site na onye nlekọta weebụ.
Ebe ọ bụ na a na-ahazi faịlụ EPUB dịka faịlụ ZIP, ị nwere ike ịnyegharị akwụkwọ ePUB , dochie .epub na .zip , wee mepee faịlụ ahụ na usoro ọkacha mmasị faịlụ gị, dị ka ngwá ọrụ 7-free. N'ime ị ga-achọta ọdịnaya nke e-akwụkwọ EPUB na HTML , yana foto na ụdị eji mepụta faịlụ EPUB. Ụdị faịlụ EPUB na-akwado embedding faịlụ dị ka GIF , PNG , JPG , na SVG oyiyi.
Rịba ama: Ụfọdụ faịlụ EPUB bụ DRM-echebe, nke pụtara na ha nwere ike ịmeghe naanị na ngwaọrụ ụfọdụ enyerela ikike ile akwụkwọ ahụ anya. Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeghe e-akwụkwọ site na iji ụfọdụ n'ime mmemme ndị dị n'elu, ị nwere ike ileba anya ma edere akwụkwọ ahụ n'ụzọ ahụ ka i wee nwee ike ịmatakwu ụzọ meghere ya.
Olee otú iji tọghata EPUB File
Ebe ọ bụ na ọtụtụ kọmputa adịghị enwe mmemme ndabara maka mmepe faịlụ EPUB, ha enweghị otu na-agbanwegharị faịlụ EPUB. Ụzọ maka ịtụgharị faịlụ EPUB gụnyere:
Caliber bụ usoro nke mbụ maka ịtụgharị faịlụ EPUB na usoro ọzọ. Ọ na-agbanwegharị na site na ọtụtụ usoro ndị ọzọ e-akwụkwọ, gụnyere ndị kwekọrọ na Kindle Amazon. Ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a kwadoro gụnyere EPUB ka FB2 , HTML, LIT, LRF, MOBI , PDF , PDB, RTF , TXT , na SNB.
Iji nyocha Ịntanetị Online nwere ụzọ ọzọ iji mepụta faịlụ EPUB ngwa ngwa site na usoro ọzọ dịka AZW, TCR, na ndị ọzọ, site na ọrụ ntọghata n'ịntanetị. Ebe ahụ nwekwara ePub Converter ka ị nwee ike ịmegharị ụdị faịlụ ndị ọzọ, dịka PDF, na usoro EPUB. Nke a bụ ụzọ dị mfe maka ịmepụta e-akwụkwọ site na faịlụ akwụkwọ mbụ gị.
Zamzar bụ onye ọzọ na- edegharị Ịntanetị EPUB. Ị nwere ike iji weebụsaịtị iji gbanwee faịlụ EPUB na PDF, TXT, FB2, na usoro ndị ọzọ yiri ederede.
Ị nwere ike ịnwa igbanwe faịlụ EPUB site na imeghe ya na otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ e-ede na ịhọrọ ịchekwa ma ọ bụ bupụ faịlụ eghe dị ka faịlụ ọkpụkpọ ọzọ, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị adị irè dịka iji Caliber ma ọ bụ ndị na-echegharị n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị ahụ na-arụ ọrụ, lelee usoro ihe omume Software Conversion ọzọ.
Kedu ihe bụ SD2F Njikwa?
Kedu ihe Njikwa ATOM?
Kedu ihe bụ AHS File?
Kedu ihe bụ XBIN Njikwa?
Kedu ihe Njikwa DOCM?
Kedu ihe bụ CGI File?
Kedu ihe bụ MSI File?
Esi emeghe, dezie, ma tọgharịa EDRW faịlụ
Esi emeghe, dezie, ma tọgharịa faịlụ CATDRAWING
Kpọọ ọrụ: Black Ops Cheats - Xbox 360
Denon na-agbakwụnye ụlọ obibi ihe nkiri ụlọ abụọ na 2015 S-Series Line
Hazie Mail gị na Mailboxes
Ihe kpatara na otu esi eji ihe di nma
Nduzi maka Nsogbu di n'etiti ndi na-ebi akwukwo na oru na teepu
Uzo esi enweta ihe ntinye akuku nke oma na Gmail
The 10 Best Free égwu maka gam akporo
Onu ogugu 5 maka Multi-Platform Mobile App Development
Nyochaa: Afterglow Universal Wireless Headphones
Ụgwọ Ọrụ 8 kachasị mma nke Taya iji Zụrụ na 2018
Gwa Ndezigharị Kaadị Mac gị
Kedu ozi nzi ozi Blackberry?
Ojiji Uzo Ojiji
Atụmatụ Atụmatụ Atụmatụ na Atụmatụ
Ma ọ bụ Orb Audio People's Choice Home Theater System Review
Egwuregwu Apple ọ bụla nke Afọ, Mgbe
Ihe kachasị mma maka nyocha na Ijikwa data
Ples Tiles 2 Nyochaa: Ụtọ
Sistemụ arụmọrụ TV nke Tizen Smart nke Samsung
Kedu ihe bụ FAX File?